Jona 6, 2018 Admin
Polisy Indiana Bust Crypto-monina goavana Ponzi Scheme
Ny Ponzi Nizara ny fandaharana maro amin'ny alalan'ny Dr. Amit Lakhanpal, Tale Jeneralin'ny ny Money Trade Coin Group sy CMD ny Flintstone Group. Ny manam-pahefana fa Lakhanpal efa namorona cryptocurrency antsoina hoe ny vola Trade Coin (amin'ny Foibe Fanofanana Misiônera), izay mafy marketed ho an'ny fiaraha-monina mivelatra kokoa Indiana mba hamitahana ny mpampiasa vola ho tombantombana hafa efaha. Birao in Orion Business Park nanana ny Flintstone Group Real Estate fampandrosoana fahafahana misafidy dia voalaza fa “eo anivon'ny hosoka” sy ny mpiasa orchestrating ny ankamaroan'ireo hosoka ireo fisolokiana; Ny hahafantaran'ny mpampiasa vola “folo ny roa-polo heny tao anatin'ny efa-ny enim-bolana,” ny gazety Times Of India. Nisy nilaza fa ny sasany ihany koa ireo mpampiasa vola nampanantenaina mihitsy aza Karaiba zom-pirenena, tena toetrany sy ny kaonty banky Soisa ho takalon'ny ny fampiasam-bola.
Voalaza fa ny vola novinavinaina nahazo ity Ponzi ankapobeny dia eo ho eo ny rafitra 500 crore, izay ampitoviny amin'ny $ 6,699,450,000.
Nandritra ny bust, ny Thane nosamborin'ny polisy ary nisambotra Taha Kazi, manan-danja iray amin'ireo teknisiana flanking, nefa mbola mitady Lakhanpal sy efatra manan-danja hafa sarin-ny hosoka.
Ny Ponzi dia fanadihadiana ny manam-pahefana eo an-toerana manaraka ny fitarainana avy any Delhi ny Tale Mpitantana Pravin Agarwal rehefa tsy nahazo payouts avy amin'ny orinasa. Lefitra lehiben'ny polisy Abhishek hoy Trimukhe:
“Izahay ny heloka bevava ao amin'ny Chitalsar Polisy Station, izay voampanga cryptocurrency varotra ny vola madinika, ary namitaka ny olona maro.”
Nanomboka tamin'izay, ny polisy fomba ofisialy ankehitriny namoaka “raharaha ny hosoka, mpanao heloka bevava ny fandikan-dalàna, forgeries sy ireo faritra manan-danja ny IPC, Ankoatra ny Maharashtra Lalàna ho an'ny Fiarovana ny mpampiasa vola Liana, 1999, ary koa eo ambanin'ny Information Technology Act”.
Na dia mbola tsy fantatra hatraiza ity tontolo Ponzi fiantraikany ny faritra, ny polisy tatitra fa nanafika ny faharoa hotontosaina amin'ny birao hafa ao Kailas Industrial Park, Vikhroli.
Rehefa afaka izany, Tsy niraharaha, maro ankehitriny no mino fa scam ity dia ampahany iray lehibe kokoa Ponzi miasa avy tany Dubai. Efa nisy tatitra vao haingana fa Lakhanpal efa niasa tamin 'ny fahamboniako Sheikh Ahmed Obaid Al Maktoum Bin ny Cabinet mba hanangana “Al Teller Group,” vaovao miorina Dubai Diamond tohanan'ny crypto startup. Tsy mikendry ny hanangana blockchain fananan'ny izay napetraka tamin'ny vatosoa ary azo natakalo alalan'ny in-trano fifanakalozana. Izany dia manelingelina fa Al Kasir Group dia efa nanomboka ny “Mialoha voalohany Blockchain Asset Fanatitra” ny alalan 'ny Al Kasir Group vavahadin-tserasera, izay nahasarika fampiasam-bola. Na ny filazana fa raha ny marina izany ilay reny tanora indrindra Ponzi ny jiolahim-boto, Mbola ho hita.
$158M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Inona no tonga Manaraka ny Bitcoin Price?
Bitcoin sy ny si ...
Bitcoin mihoatra noho ny Go ...